Noho ny fahafantarako fa izany angamba no fotoana voalohany nahatsapan’ io zanakay lahy kely io ny fitarihan’ ny Fanahy Masina tamin’ ny fomba mahery vaika toy izany, dia nandohalika tamin’ ny tany teo anilany aho. Raha nivezivezy nanodidina anay ireo mpitsidika hafa, izahay sy Ben kosa dia nandany minitra maro niarahana nianatra mikasika ny Fanahy Masina. Talanjona aho tamin’ ny nahafahanay nifampiresaka tamin’ ny fomba tsotra mikasika ny fahatsapana masina nananany. Rehefa nifampiresaka izahay, dia lasa nazava fa ny tena nitondra fitaomam-panahy ho an’ i Ben dia tsy ny zavatra izay hitany fa ny zavatra izay tsapany—tsy ny hatsarana azo tsapain-tanana nanodidina anay fa ilay feo tony sy malefakin’ ny Fanahin’ Andriamanitra izay tsapany tao am-pony. Nozaraiko taminy ny zavatra nianarako avy tamin’ ny zavatra niainako manokana, toy izany ohatra ny namohazan’ ny fitalanjonany amin’ ny maha-zaza azy indray ilay fahatsapana fankasitrahana lalina tao amiko noho io fanomezana tsy hay lazaina avy a